Chisco Group of Companies' enyela gọọmenti steeti Anambra onyinye ego dị nde naịra iri - Igbo News | News in Igbo Language
Chisco Group of Companies' enyela gọọmenti steeti Anambra onyinye ego dị nde naịra iri
Apr 8, 2020 - 22:00 Updated: Jan 22, 2021 - 15:38
Na ntụnye nke ya n'ịkwado agha ahụ a na-ebu megide ọrịa nje coronavirus, ụlọọrụ Chisco, bụ 'Chisco Group of Companies' enyela gọọmenti steeti Anambra onyinye ego dị nde naịra iri.
Ya bụ ụlọọrụ na-ewu èwù n'ihe gbasaara ime njem okporoụzọ nọrọ na nso nso a wee nyefee ya bụ ego nkwado n'aka gọọmenti steeti ahụ n'obi gọọmenti dị n'Awka.
N'okwu ya oge ọ na-enyefe gọọmenti akwụkwọ ndọrọ ego ahụ, onyeisi ụlọọrụ ahụ, bụ Maazị Chidi Anyaegbu, nke nlekọta na-ahụ maka ngalaba mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị, bụ Maazị Uche Ochuba nọchitere anya ya, kọwara na nke ahụ so n'otu ọrụ nkwado ụlọọrụ ahụ n'ime steeti ahụ.
Ọ sịkwa na nke ahụ bụ ịgbaso ọkpụkpọ oku gọọmenti steeti ahụ kpọrọ ka ndị mmadụ na otu dị iche iche tinye aka ma gbatakwa ọsọ enyemaka n'agha ahụ a na-ebu megide mbata na maọbụ mgbasa ọrịa nje korona na steeti ahụ.
N'akụkụ nke ya, onye soro ya bụ nwa amadi wee bịa ije ahụ, ma bụrụkwa onyeisi ọchịchị obodo Amichi, bụ Maazị Dan Ugomba nọkwazịrị ebe ahụ kpọkuo ndị Anambra ka ha kwàdo gọọmenti n'agha ahụ ọ na-ebu.
O gosipụtakwara afọ ojuju ya banyere ihe dị iche iche gọọmenti megoro banyere ya bụ ọrịa nakwa ọdịmma ụmụafọ steeti ahụ n'ime oge a, ma kpọkuo ya ka ọ watasie ọgọdọ ike n'ime nke ahụ.
Ka ọ na-anabata ihe ndị ahụ n'aha gọọmenti, odeakwụkwọ ukwu steeti Anambra, bụ Ọkammụta Solo Chukwulobelụ kèlèrè ya bụ nwa amadi na ụlọọrụ ahụ maka onyinye afọ ofufò ya, ma kekwazie ndị ọzọ na ụlọọrụ dị iche iche na-agbatara steeti ahụ ọsọ enyemaka n'oge a.
O kwere nkwa na gọọmenti ga-ejikwa ma tinye ego ahụ n'ọrụ dịka o siri kwesi ma werekwa ya mee ihe e hibeere ya.
Ndị ọzọ dị iche iche nyere gọọmenti nkwàdo nso nso maka ibu agha megide ọrịa nje korona gụnyèrè: ụlọ mmepụta eriri ọkụ 'Cutix Cable' (nyéré akụrụngwa ahụike gburu ego ruru nde naịra iri), òtù 'Agụleri World Forum' (nyéré nde naịra abụọ) tinyere ndị ọzọ.
Onye Ogbuo Ọwara Ọsọ Akụgbuola Otu Nwaanyị n'Ọnịtsha
Anyị Agaghị Ekwe Ka Onye Ọbụla Gwou Ojoro -- APGA
N'Anambra, A Malitela Ịkụtùsi Ihe Iwu Akwadoghị A Rụrụ...
Ụlọ Ọba Akụ FCMB Ejirila Akpa Osikapa 850 Kwado Gọọmenti...
Ndị bi n'Ọnịtsha arịọ enyemaka, dịka iju mmiri tochiri...